Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Croatian Marcelo Brozovic Akụkọ nwata na mgbakwunye Eziokwu Biography
Ihe omuma anyi nke Marcelo Brozovic bu ihe omuma banyere akuko nwata ya, Mbido ya, ndi nne na nna, ezin’ulo ya, nwunye ya, umuaka ya, ndu ya, uru ya na ndu onwe onye.
Na nkenke, nke a bụ akụkọ banyere njem ndụ ndị Croatian, site na nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ onwe gị sie ike, nke a bụ ogidi ya gaa na gallery ndị okenye - nchịkọta zuru oke nke Marcelo Brozovic's Bio.
Luka Modric Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
Akụkọ ndụ Marcelo Brozovic.
Ee, onye ọ bụla maara Brozovic bụ onye na-eme egwuregwu nke ukwuu. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole na-atụle mbipụta anyị nke Marcelo Brozovic's Biography nke na-akpali mmasị. Ugbu a, na-ebughị ụzọ, ka anyị bido.
Marcelo Brozovic Nwatakiri Akụkọ nke:
N'ihi na Biography EBIDO, ọ na-utu aha “Agụ iyi". Marcelo Brozović Amuru na abali iri na isii nke onwa iri na otu nke aho 16 n’obodo Zagreb na Croatia. Amụrụ nne ya, Sanja Brozović na nna ya, Ivan Brozović.
Andrej Kramaric Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Foto Marcelo Brozovic. Nke a bụ ihe kachasị mma anyị nwere ike ịchọta. Ebe E Si Nweta: Picuki
Ebe ọmụmụ Marcelo Zagreb, a na-akpọkarị “obodo dragọn“. Obodo ahu bu agbụ dragon ma juputa na ihe anakpo ala na ihe ochie nke agwo.
Dabere na Obodo, A nụrụ asịrị na Zagreb nwere eze nwanyị a na-akọ ọnụ nke akụkọ ifo Greek- “Medusa”Onye liri ya n’ime ala. N'okpuru bụ foto nke otu nne na nna Marcelo Brozovic - nna ya yiri ya, Ivan.
Ọ bụ ezie na Marcelo nwere anya nke na-anaghị ekwu ọtụtụ ihe gbasara agbụrụ ya na ezinụlọ ya, anyị ji n'aka na ọ bụ mba Croatian.
N'ezie, a zụlitere ya n'obodo Okuje dị nso na Velika Gorica na Zagreb ebe o toro na nwanne ya nwoke, Patrick Brozović na nwanne nwanyị, Ema Brozovic.
Ẹkebọk enye ke obio-in̄wan̄ ke Zagreb. Ebe E Si Nweta Foto: Atlas World na Instagram.
N'ịbụ onye tolitere n'obodo nta ahụ, ọ marala na Marcelo ga-enwe ọdịnihu dị mma na football. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na nna Marcelo buru ibu n'ịzụ ụmụ ya ka esi egwu egwuregwu ahụ.
Ivan Rakitic Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ihe omuma
Marcelo Brozovic Oge Afọ:
Ka ọ na-erule oge Marcelo dị afọ 9-10, o sonyeere n'usoro ndị ntorobịa nke ọgbakọ Hrvatski Dragovoljac na mpaghara Novi Zagreb iji nwee ahụ ọfụma ịgba bọl.
Nwa ahụ dị afọ 9-10 bụ nwa gbara egwuregwu na Hrvatski Dragovoljac. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram na Hrvatski.
Mgbe ọ nọ na Dragovoljac, ọ naghị ewe oge maka ndị njikwa klọb ahụ ịghọta na Marcelo bụ ihe dị egwu na-elekọta ha n'ihi na ọ dị mma nke ọma ma nwee ike igwu egwuregwu atọ n'usoro!
Marcelo Brozovic Ndụ Ndụ Ndụ:
Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na Marcelo dekọtara ngwa ngwa site na Dragovoljac ruo mgbe o mere ọkachamara ọkachamara ya na klọb na July 2010.
Agbanyeghị na onye Midian na-eto eto nke 17 mere ihe ngosi ya tupu a hụ ya n'ụzọ ziri ezi dị ka okenye, enweghị ọtụtụ ihe a tụrụ anya n'aka ya.
N'ezie, ọ bụghị nwa ịtụnanya nke usoro ntorobịa ntorobịa nke ọ gụsịrị akwụkwọ. N'ihi ya, ọ na-eji ọ enjoyingụ were egwuregwu bọọlụ nke mbụ na ọsọ nke onwe ya nke na o meriri ihe mgbaru ọsọ ọkachamara mbụ ya na Machị 2011 (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ mgbe mmalite ya)!
Marcelo Brozovic Biography- Roadzọ ya nke Maara Aha Akụkọ:
Oge mgbanwe nke ọrụ Marcelo bịara n'etiti ọnwa Julaị 2011 mgbe ọ sonyeere NK Lokomotiva mgbe Dragovoljac kwụsịrị ịbanye.
Ivan Perisic Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ọ bụ na Lokomotiva ka onye midfielder ji nwayọọ nwayọọ gbanwee n'ụdị ya. O meriri okpukpu anọ iji nyere klọb aka inweta ọkwá dị elu n'etiti okpokoro!
Ọ bụghịkwa onye flop na Dinamo Zagreb, otu ụlọ ọgbakọ ọ sonyere na August 2012 mgbe ọ gwụchara otu oge na Lokomotiva.
You maara na Marcelo gụchara oge mbụ ya na Dinamo site na inyere klọb aka inweta otu egwuregwu?
'The Bad' ọbụna ruru agba nke abụọ nke 2012-13 Croatian Football Cup wee mee ya n'òtù egwuregwu nke Njikọ Njikọ.
Hụ onye nyere aka gbanwee obi ike nke Dinamo Zagreb n'oge na-adịghị anya mgbe ọ sonyeere klọb ahụ na 2012. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Marcelo Brozovic Biography- Nbilite Ya Na-ewu ewu Akụkọ:
Ọụ nke ndị òtù ezinụlọ Marcelo Brozovic amaghị ókè ọ bụla n'oge ọ mechara nweta akwụkwọ ikike visa ya igwu egwu na Europe.
N'ihi Marcelo's nnukwu egwu egwu na Dinamo, Inter Milan na-atụghị egwu ịbanye ya na mbinye ego - na 2015 - iji nyere aka mee ka etiti ụlọ ahụ dị ike.
N'iji nọmba 77, Marcelo gosipụtara na ọ bụ akụ bara uru nke mere ka tebụl Nerazzurri bụrụ nkwekọrịta na-adịgide adịgide n'ihu ya mgbe oge mbụ ya gasịrị.
Onye midfielder na-agafeela afọ ole na ole sochirinụ nyere Inter Milan ọsọ maka ego ha site na ịchọta isi ihe mgbaru ọsọ ma nyere Nerazzurri aka ịmechaa Coppa Italia na ọnọdụ tebụl dị mma.
Kedu ihe ọzọ? ọ bụ onye ọkpụkpọ isi nke nwere ihe ọ ga - ewe iji mee njikwa - Antonio Conte mezuo n'ọchịchọ ọ na-ejedebe Juventus kachasị na Serie A. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ọ bụ eziokwu na onye ọkpọ egwuregwu ahụ bara uru nye Inter Milan nke o nyeere aka nweta mmeri isi. Ebe E Si Nweta Foto: DailyMail.
Nwanyị Marcelo Brozovic, nwunye, na ụmụaka:
Ewezuga ọrụ Marcelo, ọ nwere otu n'ime mmekọrịta mmekọrịta siri ike n'etiti ndị na-agba ụkwụ ụkwụ na-aga ahịa ha na egwuregwu Italiantali.
N'ihi enyi ya nwanyị tụgharịrị nwunye Sivija Lihtar. Amabeghị ihe gbasara mgbe Sivija ghọrọ enyi nwanyị Marcelo. Agbanyeghị, ọnụnọ ya na ndụ nke onye etiti emeela ka ọ kwụsie ike na ọrụ ya.
Foto tụfuru Marcelo Brozivic na nwunye ya n'ọdịnihu Sivija Lihtar mgbe ha ka na-etolite etolite. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Ka a sịkwa ihe mere midfielder ji mee nwunye site na ya wee nwee obi ụtọ na alụmdi na nwunye ha. Di na nwunye nwere umuaka abuo n'oge edere.
Ha gụnyere nwa nwanyị - Aurora (amụrụ na 2016) na nwa nwoke - Rafael (amụrụ 2019). N'okpuru ebe a bụ foto mara mma nke nwunye Marcelo Brozovic na ụmụaka ka ha na-agba ekeresimesi na 2019.
Foto mara mma nke nwunye Marcelo Brozovic na ụmụaka ka ha na-agba ekeresimesi na 2019. Ebe E Si Nweta: Instagram.
Ndụ Marcelo Brozovic Ezinụlọ:
Ọ bụ eziokwu a na-apụghị ịgbagha agbagha na onye ọ bụla nwere ezinụlọ na ha bụ ihe kachasị ọnụ ahịa na ndụ. Anyị na-ewetara gị eziokwu ndị ọzọ gbasara ndị ezinụlọ Marcelo Brozovic malite na nne na nna ya.
More banyere Nna Marcelo Brozovic:
Ivan Brozović bụ nna nke onye na-egwu egwu. Ọ bụ onye na-anụ ọkụ n'egwuregwu football nke na-ahụ na ndị ezinụlọ ya na ndị ọ maara nke ọma na-egwu egwuregwu ahụ.
N'ezie, Ivan bụ onye nchịkwa nye Marcelo n'oge ndụ nwata ahụ wee gaa n'ihu iji hụ na ọganihu ya na football kachasị elu ghọrọ eziokwu.
Marcelo Brozovic ya na nna ya Ivan obere oge ka ọ sonyeere Inter Milan. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
More banyere mama Marcelo Brozovic:
Sanja Brozović bụ mama na-ahụ n'anya ma na-akwado nke midfielder. Ọ bụ ya kacha nwee obi ụtọ n'egwuregwu ọ bụla Marcelo na-egwuri egwu n'oge ọ bụ nwata.
Ọbụna o nyeere di ya aka ịdekọ ihe ndekọ banyere mmalite dị ala nke Marcelo site na ihe mgbaru ọsọ ya iji nyere aka. Ọ bụ n'ihi ihe ndị a mere Marcelo ji hụ nne na nna ya n'anya ma na-akwanyere ha ùgwù ruo ụbọchị.
Banyere ụmụnne Marcelo Brozovic:
Marcelo tolitere na ụmụnne abụọ na nzụlite ezinụlọ nke etiti na Okuje Village na Zagreb. Ha gụnyere nwanne ya nwanyị a ma ama, Ema Brozovic na nwanne nwoke, Patrick Brozovic.
Dị ka Marcelo, Patrick nwere ọrụ dị ukwuu na-ewuli elu na bọlbụ mana enweghị nkwụsi ike ịrị elu site na ọkwa ntorobịa. Ka o sina dị, ọ na-akwado ọrụ Marcelo ma na-enwe obi ụtọ maka ebe dị elu nke onye midfielder nwetara.
Nwere ike ịhụ ụdị oyiyi dị n'etiti ụmụnne abụọ a? Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Banyere ndị Marcelo Brozovic:
Ewezuga ndị nne na nna na ụmụnne Marcelo Brozovic, amabeghị ọtụtụ ihe banyere agbụrụ ezinụlọ nke Midfielder ma ọ bụ nna nna ya, ọkachasị nne na nna ya na nne na nna ya.
Otu ihe ahụ gafere osisi maka ndị nwanne mama nwanne, nwanne nna na nwanne nne ya. N'otu aka ahụ, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya amaghi n'oge a na-ede edemede a.
Marcelo Brozovic Ndụ nke Onwe Onye:
Site na njikwa football ya, Marcelo Brozovic nwere otu nnukwu agwa nke jikọtara ọgụgụ isi, ọgụgụ isi, mmesapụ aka na arụsi ọrụ ike nke Scorpio zodiac nwere mmụọ na-atọ ụtọ na-adọrọ adọrọ.
Na mgbakwunye, ọ naghị ekpughe eziokwu banyere ndụ onwe ya na nke onwe ya ebe ihe omume ndị mejupụtara egwuregwu na ọdịmma ya gụnyere igwu egwu tennis, ịnọgide na-egwu egwuregwu basketball, igwu mmiri na iso ezinụlọ ya na ndị enyi ya na-egwu oge.
Ndị na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ anaghị agba egwu tenis mana Marcelo nwere! Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Eziokwu Ndụ Marcelo Brozovic:
Ulo oru Marcelo Brozovic ruru ihe ruru $ 15 nde dika na February 2020.
Na-enye onyinye maka mmiri ọsọ ọsọ ya bụ ụgwọ na ụgwọ ọ na-enweta site na ịgba bọl. Na mgbakwunye, nkwenye na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịkpụzi omume mmefu ya.
N'ihi ya, Midfielder adịghị mkpa imebi akụ iji bie ndụ okomoko. Ntuziaka maka ezigbo ndụ Marcelo bụ ụgbọ ala ndị ọ na-agba.
Ọ na-ebikwa na nnukwu ụlọ na ụlọ ndị kwekọrọ na ya na-agbanwe agbanwe na-atọ ụtọ maka ebe obibi.
Mercedes jeep a dị oke ọnụ bụ ọtụtụ n'ime njem ndị o ji agba ọsọ. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Eziokwu Marcelo Brozovic:
Iji chịkọta akụkọ banyere Marcelo Brozovic na akụkọ ndụ ya, ebe a bụ obere ihe ọmụma ama ma ọ bụ akụkọ a na-akọwaghị banyere etiti egwuregwu etiti.
Mmebi ụgwọ ọnwa:
Dị ka n'oge ederede, nkwekọrịta ọkachamara nke ndị Croatian na Inter Milan na-eme ka ọ na-akwụ ụgwọ buru ibu 6.4 Nde Euro (5.5 Nde Pound) kwa afọ. Gwọ ụgwọ ụgwọ Marcelo Brozovic na ọnụ ọgụgụ, anyị nwere mmebi na-esonụ.
Nkwuputa ego nke Marcelo Brozovic na Euro (€)
Ọrụ Salary Marcelo Brozovic na Pound (£)
Arnnweta ego kwa afọ € 6,400,000 £ 5,500,000
Ego kwa ọnwa € 533,333,3 £ 458,333.3
Arnnweta ego kwa izu € 123,076.9 £ 105,769.2
Ego kwa ubochi € 17,534.25 £ 15,068.49
Arnnweta ego kwa elekere € 730.6 £ 627.85
Ego kwa nkeji € 12.18 £ 10.46
Arnnweta ego kwa abụọ € 0.20 £ 0.17
Anyị agbakwunyela ụgwọ ọnwa Marcelo Brozovic na nkeji nke abụọ ọ bụla, na-etinye ya n'ime ihe ọ na-enweta kwa nkeji.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Marcelo Brozovic'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Ị maara?… Ọ ga-ewe onye ọrụ nkezi bi na Europe opekata mpe 15.27 afọ iji nweta otu ihe ahụ Brozovic na-akpata na 1 ọnwa.
Marcelo Brozovic si FIFA ọkwa:
N'adịghị ka onye compatriot ya Josip Ilicic, Marcelo Brozovic nwere ọkwa FIFA dị obere nke 82 n'agbanyeghị oke egwu egwu egwu ya gụnyere gụnyere inyere Croatia aka iru njedebe nke iko ụwa 2018. Ka o sina dị, enwere olileanya na ọkwa ya ga-adị mma n'ọdịnihu.
Okwesiri inweta ọkwa di elu Ikwenyeghi?
Banyere egbugbu Marcelo Brozovic:
Nnyocha omimi nke Marcelo physique kpughere na ịdị elu ya dị sentimita ise n’ogologo iri na otu ka ejiri egbugbu n’aka ya na aka ekpe. Onye ọkpụkpọ etiti ahụ ka nwere ike ịnweta ọtụtụ nka ndị dị ya n’obi, olu, ụkwụ, azụ na afọ ya.
Enwere ohere zuru ezu maka egbugbu ndị ọzọ. N't kweghị?
Banyere Marcelo Brozovic's Nickname:
A kpọrọ Marcelo Brozovic “agụ iyi” n’ihi na ọ wepụrụ otu obere agụ iyi na-agba ọsọ na-egbochi Luis Suarez nke Barcelona si na ịgbabụ bọọlụ free-kick megide Inter Milan n'oge asọmpi na asọmpi Champions League.
Marcelo hụrụ aha aha ahụ n'anya ma tinye otu foto nke onwe ya na-eyi uwe agụ iyi n'oge Halloween.
Eziokwu gbasara aha otutu ya na foto.
Banyere Marcelo Brozovic nke Medal of Honor:
Na 2018, ndị ezinụlọ Marcelo Brozovic nwere obi ụtọ ịnọ n'etiti ezinụlọ ole na ole na Croatia bụ ndị hụrụla (Marcelo) nke ha Iwu nke Duke Branimir.
Ọ bụ naanị mmadụ ole na ole ka enyere Duke Branimir na Marcelo Brozovic bụ otu n'ime ha.
Ihe nrite ahụ, nke a maara dị ka Uhie kneza Branimira (na asụsụ Croatian) bụ agba nke asaa kachasị mkpa nke Republic of Croatia nyere. Mario Mandzukic na Luka Modrić n'etiti ọtụtụ ndị egwuregwu ndị Croatian ndị ọzọ meriri ya.
Banyere Okpukpe Marcelo Brozovic:
Dị ka compatriot ya Luka Modric, Marcelo egosighi nkwupụta ihu ọha ya n'okwu nke okwukwe. Agbanyeghị, nsogbu ndị ahụ na-amasịkarị ya ịbụ onye kwere ekwe.
Iji malite, nne na nna Marcelo Brozovic zụlitere ya n'ụlọ Ndị Kraịst. N'ikwu nke a, nwanne ya nwoke na nwa ya zara aha ya bụ Patrick na Rafael n'otu n'otu.
Ihe omuma ihe omuma Marcelo Brozovic:
N'akụkụ ikpeazụ nke Marcelo Brozovic's Biography Eziokwu, ị ga-ahụ isi ihe ọmụma Wiki ya. Nke a ga - enyere gị aka ịchọta ozi banyere ya n'ụzọ dị nkenke ma dị mfe.
Marcelo Brozovic Wiki Enyocha
Aha n'uju: Marcelo Brozović (atikpọ okwu Croatian: [martsělo brǒːzoʋitɕ]
Andbọchị na Ebe Ọmụmụ: 16 Nọvemba 1992 (Zagreb, Croatia)
Aha nne na nna: Ivan Brozović (Nna) na Sanja Brozović (Nne)
Aha ụmụnne: Ema Brozovic (Nwanna Nwaanyị) na Patrick Brozovic (Nwanna)
Ihe nrite obodo nke Sọpụrụọnụ: Iwu nke Duke Branimir
Age: 27 (dika na February 2020)
elu: 1.81 m (5 ft 11 na)
Ihe akara Zodiac: Scorpio
-arụ: Onye na-agba ya (Midfield)
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Marcelo Brozovic Childhood Story Plus Uzo nke Utold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Bọchị gbanwee: Jenụwarị 28, 2021
Bọchị gbanwee: Mee 23, 2021